Guddi loo saarey Shaqaaqadii xalay ka dhacday Dhuusamareeb | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Guddi loo saarey Shaqaaqadii xalay ka dhacday Dhuusamareeb
Guddi loo saarey Shaqaaqadii xalay ka dhacday Dhuusamareeb
Waxaa saakay degan xaalada Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Dowlad goboleedka Galmudug,halkaas oo xalay dagaal kooban oo khasaaro geystay uu ku dhex-maray Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda iyo ilaalada hoggaanka Ahlusunna Wal-Jamaaca.
Isku socodka dadka iyo Goobaha Ganacsiga ayaa si caadi ah u Shaqeynaya marka laga reebo wadooyinka Gala xarumaha ay dagan yihiin madaxda Dowlada oo lagu jarey Biro iyo dhagaxaan farabadan.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay waxaa uu la kulmay Saraakiisha laamaha Amniga Magaalada iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya,iyaga oo ka wada hadlay Shaqaaqadii dhacday iyo sida ay ku timid.
Sidoo kale wararka aan heleyno ayaa waxaa ay sheegayaan in Shaqaaqadaas loo saarey guddi baaris ah,kuwaas oo Maanta tegaya Goobtii iska hor imaadku ka dhacey ee afaafka hore ee Xarunta Inji,iyaga oo suaalo waydiin doono Xubno labada dhinac ah oo goobjoog u ahaa sida wax u dheceen.
Dhinaca kale Hoggaanka ahlusunna ayaa waxaa ay dhankooda ku doodayaan in lasoo weerarey,yaga oo ujeedadu aheyd waxyeeleynta xubno ka tirsan 20-ka xildhibaan oo Ku dhawaaqeen kuwaasoo diidmo kala kulmaya Dowlada faderaalka iyo Odayaasha beelaha ,halka Saraakiisha Dowlada ay dhankooda sheegeen in dhankooda Ciidamada Ahlusunna rasaas la beegsadeeen gawaari Ciidamada Dowladu wateen oo marayay afaafka xarunta inji kuwaas oo ay la socdeen Saraakiil iyo Xildhibaano faderaalka ah.
Sidoo kale war kooban oo kasoo baxay taliska Booliska Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu sheegay in boolisku uu baaris ku haayo israsaaseyntii koobneyd ee xalay ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.